YCA ရက်သတ္တပတ်တစ်ရက်- ကိန်းဘရစ်ချ်တက္ကသိုလ်တွင် ရေငုပ်ပြီး ပြန်သွားပါ။ - ဘဝ
YCA ရက်သတ္တပတ်တစ်ရက်- ရေငုပ်ပြီး ပြန်သွားပါ။
ဟယ်လို ဟယ်လို ဟယ်လို! အဲဒါဘာလဲ? အဒေါ်ပြန်လာပြီလား ဟုတ်တယ်၊ မင်းကြားတယ် ငါတို့ပြောတာ ဦးစွာငုပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ရက်သတ္တပတ်တစ်ကော်လံတွင် အဓိပ္ပါယ်မရှိသောပုံစံ။ အမိုက်စားများနှင့် နောက်ထပ်မိတ်ဆက်ပေးလိုပါသလား။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထွက်စစ်ဆေးပါ။ တစ်ပတ် သုည မိတ်ဆက် ကော်လံ . ငါတို့မှာ ထုပ်ပိုးဖို့ အများကြီး ရှိတယ်၊ ဒါကြောင့် အဲဒီအိတ်တွေကို လွတ်ရအောင် .
အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ ပေါင်းစည်းပြီးနောက် အခု ကော်လံမှာ ကျွန်တော်တို့ သုံးယောက် အလုပ်လုပ်နေတာ သတိရပါ။ အမ်မလီ ဒါကြောင့် ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ အကြံပြုချက်က ပိုစပ်ပါလိမ့်မယ်။
Q1: မင်္ဂလာပါ။ သင်လုပ်နေတာတွေကို ချစ်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်း/စိုးရိမ်မှုသည် ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းအုပ်စုနှင့် ပတ်သက်သည်ဟု ကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ michaelmas သက်တမ်းအတွင်း ကျွန်ုပ်တို့သည် အချိန်အတော်ကြာအောင် (ကျွန်တော်က ပိုသစ်လွင်သည်) သို့သော် ဝါတွင်းကာလတွင် အများစုမှာ တက္ကသိုလ်တက်ပြီး အိမ်ပြန်ခဲ့ကြသည်။ ဥပုသ်လအစကတည်းက သူတို့သည် ကျွန်ုပ်ကို 'မေ့' ပြီး ကျွန်ုပ်မပါဘဲ ဘဝကို ဆက်လျှောက်သွားပုံရသည်။ နည်းနည်း အဓိပ္ပာယ်မရှိပေမယ့်၊ သူတို့မှာ ကျွန်မမပါဘဲ အဖွဲ့ချတ်လည်း ရှိတယ်လို့ ထင်ပါတယ်... ဘယ်လိုယူရမယ်ဆိုတာ မသေချာဘူး၊ ကျွန်မ တွေးနေပေမယ့် အဲဒါကို သူတို့နဲ့ စကားပြောသင့်သလား။
မင်းဒီလိုခံစားရတာကို ကြားရတာ စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အရင်ဆုံးပြောချင်တာက သူတို့မှာ မင်းမပါဘဲ group chat လုပ်ရင်တောင်၊ ဒါက သေချာပေါက် ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး။ . ဟုတ်တယ်၊ အဲဒါက မင်းကို ဖယ်ထုတ်ခံရသလို ခံစားရနိုင်ပေမယ့် လက်တွေ့မှာတော့ အိမ်မှာနေရင်၊ သင့်အား အထီးကျန်သည်ဟု မခံစားရဘဲ အရာများကို စုစည်းရန် ၎င်းတို့က ၎င်းကို တည်ထောင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ . ခင်မင်ရင်းနှီးမှုအုပ်စုထဲမှာ ပိုအထီးကျန်တယ်လို့ခံစားရရင်၊ အကောင်းဆုံးကတော့ သူတို့နဲ့ စကားပြောပါ။ . သင်၏ (လုံးဝ တရားဝင်!) စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို ၎င်းတို့နှင့် သင့်ဆက်ဆံရေးကို ထိခိုက်စေရန် ခွင့်မပြုပါနှင့်။
သဘောပေါက်ဖို့လည်း အရေးကြီးတယ်ထင်တယ်၊ သဘာဝအတိုင်း၊ သင်က သူတို့အချင်းချင်း ရင်းနှီးနေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သင်နောက်ဆုံးသက်တမ်းဒီမှာမရှိလို့ပဲ။ သူတို့ရယ်မောရတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေထဲမှာ ဟာသအသစ်တွေလည်း ရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါကို မင်းစိတ်ဆိုးအောင် မလုပ်ပါနဲ့။ ! တစ်ခုခုဖြစ်ရင် သူတို့မှာ အချိန်ကောင်းရပြီး မင်းကို update လုပ်ဖို့ ဇာတ်လမ်းတွေနဲ့ ဒရာမာတွေ အများကြီးရှိလို့ ပျော်လိုက်ပါ။ လုပ်သင့်တာ အကောင်းဆုံးကတော့ သူတို့ကို လှည့်စားတာကို ရှောင်ကြဉ်ဖို့ပါပဲ – သူတို့ဟာ မင်းမရှိဘဲ နောက်ဆုံးသက်တမ်းကို ကုန်ဆုံးသွားတဲ့ သူတို့ရဲ့ အပြစ်မဟုတ်ဘူး၊ ကပ်ရောဂါအတွက် အပြစ်တင်ပါ။ သူတို့နဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး စကားစမြည်ပြောပါ၊ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အပ်ဒိတ်လုပ်ပါ ပြီးရင် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ပိုတွေ့ဖို့ လွတ်သွားတဲ့ အချိန်တွေကို တွန်းအားပေးလိုက်ပါ။ မင်းအားလုံး ကောင်းမွန်တဲ့ အီစတာ ဝေါဟာရကို ရရှိမှာ သေချာပါတယ်။
Q2- ကောလိပ်စာချုပ်ချုပ်ပြီးရင် နေဖို့နေရာရှာဖို့ တော်တော်စိတ်ပူတယ်။ ကျွန်ုပ်အား လာမည့်နှစ်တွင် တည်းခိုခွင့် ပေးမည်မဟုတ်သော်လည်း COVID ကာလအတွင်း နိုင်ငံတကာမှ တစ်ဦးအနေဖြင့်၊ အငှားဈေးကွက်၊ ဘေလ်များ၊ အခွန်များ သို့မဟုတ် ငွေကြေးများအပါအဝင် UK အကြောင်း ကျွန်ုပ် အမှန်တကယ် မသိပါ။ ငါ့မှာ အထူးနေရာထိုင်ခင်း လိုအပ်ချက်တွေရှိလို့ ငါတတ်နိုင်တဲ့နေရာကို ရှာမတွေ့မှာကို ငါတကယ်စိုးရိမ်တယ်။ ကောလိပ်တွေက ဘွဲ့ကြိုတန်းတက်ဖို့ အရေးကြီးမှန်းသိပေမယ့် လမ်းပေါ်ထွက်ပြီး ဘွဲ့လွန်တွေကို ဖယ်လိုက်တာ ကောင်းတယ်ထင်တယ်...
ဤသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ အထူးပြုထားသော ဘာသာရပ်မဟုတ်သည်မှာ သေချာပါသည်။ မင်း ဒါကို ရင်ဆိုင်ရမှာ အရမ်းဝမ်းနည်းပြီး ဘယ်လောက်ထိ ဖိစီးခံရမယ်ဆိုတာ တွေးကြည့်လို့ မရဘူး။ . သင့်တွင် အထူးနေရာထိုင်ခင်းလိုအပ်ချက်များရှိပါက ၎င်းသည် တန်ဖိုးရှိနိုင်ပါသည်။ DRC နဲ့ စကားပြောတယ်။ . ကျွန်ုပ်တို့လည်း သင့်အား အကြံပြုလိုပါသည်။ သင့်ကျူရှင်ဆရာနှင့် အမြန်ဆုံး စကားပြောရန် ရက်ချိန်းပေးပါ။
Q3- သင့်လက်တွဲဖော်ရဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေက သူတို့ကို ဆိုးရွားတဲ့အဖော်ဖြစ်လာစေတယ်လို့ ပြောရင် ဘယ်အချိန်က အဆင်ပြေမလဲ - သူတို့က သူတို့ရဲ့အခြေအနေကို နေ့ချင်းညချင်း မပြုပြင်နိုင်ဘူးဆိုတာ ငါသိပေမယ့် အထူးသဖြင့် ဒေါသ၊ ဝမ်းနည်းမှုတွေနဲ့ စိတ်ပျက်စရာတွေအတွက် အဆုံးမရှိတဲ့ ရေမြှုပ်တစ်ခု မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ တခြားအရာအားလုံးကို ပေးပြီးသားပါ။
သင့်လက်တွဲဖော်၏ စိတ်ကျန်းမာရေးကို တစ်ဦးတည်း ဆောင်ထားခြင်းမရှိခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သင်သည် လုံးဝမှန်ပါသည်။ ၎င်းသည် သင်၏ကိုယ်ပိုင်သုခကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။ ဒီအခြေအနေက မင်းကို ဆိုးဆိုးရွားရွား သက်ရောက်မှုတွေ စတင်လာတာနဲ့အမျှ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စကားပြောရတာ တရားမျှတတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ သူတို့အတွက် ရှိနေဖို့က မင်းအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပေမယ့်၊ စိတ်ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူတို့ပြောတာတွေကို နားထောင်ရုံမှလွဲလို့ တခြားနည်းလမ်းတွေနဲ့ သင့်လက်တွဲဖော်အတွက် သင်ရှိနေနိုင်ပါတယ်။
သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နဲ့ ထိုင်စကားပြောတာက သင်နှစ်ယောက်စလုံးကို ကူညီဖို့ ပထမဆုံးလုပ်နိုင်တဲ့အရာပါ။ သူတို့ရဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေးအတွက် သူတို့ကို အပြစ်မတင်ဘဲ သင့်အပေါ် သက်ရောက်နေတဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေအကြောင်း chat ရုံနဲ့ သင်ဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတာ သူတို့နားလည်ပါတယ်။ အချို့သော ပြဿနာများသည် အထူးသဖြင့် လေးလံနိုင်သည် - ဤအရာကို ၎င်းတို့အား ရှင်းပြရုံသာ။ သူတို့စိုးရိမ်မှုတွေကို နားထောင်ရတာ ဝမ်းသာစရာ စကားစမြည်ပြောဖို့ ရှိသေးပေမယ့်fဒါမှမဟုတ် သင့်ကိုယ်ပိုင်ကျန်းမာရေး၊ တစ်ခါတစ်ရံ ဒီကနေ နောက်ပြန်ဆုတ်ရပါလိမ့်မယ်။ . အဲဒါ အဆင်ပြေပါတယ်။
ချစ်သူက ပျော့ပျောင်းနေသလားဆိုတာ ရှာဖွေပါ။
သင့်အခြေအနေကိုသူတို့အားရှင်းပြပြီးနောက်၊ သင်တစ်ဦးကိုတစ်ဦးပံ့ပိုးနိုင်သည့်နည်းလမ်းအသစ်များကိုသင်ဆွေးနွေးနိုင်သည် - ဖြစ်နိုင်သည်မှာရက်စွဲများသို့မဟုတ်တွေ့ဆုံခြင်းများသည်ကူးစက်ရောဂါနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ဘဝအတွက်အာရုံပြောင်းနိုင်သည်၊ သင်အတူတကွလေ့လာနိုင်သည်သို့မဟုတ်အတူတကွစီမံကိန်းတစ်ခုလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ နှစ်ယောက်စလုံးကို ထိခိုက်စေတဲ့ ကိစ္စရပ်တွေအကြောင်း မပြောပါနဲ့။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်, နှစ်ယောက်စလုံး ပျော်ရွှင်စွာ အတူတူ အချိန်ဖြုန်းရန် နည်းလမ်းသစ်များကို ကြိုးစားရှာဖွေပါ။
အဲဒါကိုလည်း ထည့်မယ်။ အကယ်၍ သင့်လက်တွဲဖော်သည် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တစ်ဦးနှင့် စကားမပြောပါက၊ ၎င်းသည် အကြံပြုချက်ကောင်းတစ်ခု ဖြစ်နိုင်သည်။ .၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ ကောလိပ်အတိုင်ပင်ခံထံသို့ ဆက်သွယ်ခြင်း သို့မဟုတ် တက္ကသိုလ်အတိုင်ပင်ခံဝန်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့် တစ်စုံတစ်ဦးနှင့် စကားပြောဆိုစေခြင်း၊ သူတို့ကို သင်ထောက်ကူနိုင်ပြီး အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ အားပေးနိုင်ပါတယ်။ သင့်လက်တွဲဖော်သည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ်ဦးနှင့် စကားပြောဆိုနိုင်သည်နှင့် တပြိုင်နက် ၎င်းတို့ကို ကူညီပေးသည့် တစ်ဦးတည်းသော ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရန် မလိုအပ်ဘဲ အလေးချိန်ကို ဖြန့်ဝေသည်။
တစ်ချိန်က အလားတူအခြေအနေမျိုး ကြုံခဲ့ရပြီး ကျွန်တော့်အဖော်ထံ အကူအညီတောင်းလိုက်သည်နှင့်၊ ကြီးမားသောအလေးချိန်ကို ကျွန်ုပ်ပခုံးပေါ်မှ မြှောက်ထားလိုက်သည်။ - ဘယ်လောက်ထိ သက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတာတောင် မသိလိုက်ဘူး။ သင့်လက်တွဲဖော်ကို ကူညီဖို့ တခြားတစ်ယောက်ယောက်ရှိနေရင် y ၎င်းတို့၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မည့်အစား သင်၏ဆက်ဆံရေးကို 24/7 အာရုံစိုက်နိုင်သည်။ . သူတို့မှာ စကားပြောစရာ တခြားတစ်ယောက်ရှိလို့။ သင်ဘာပဲလုပ်လုပ်၊ ဒီကနေ အဓိက ဖယ်ထုတ်ထားတာက သင်ခံစားနေတဲ့အရာပါပဲ။ အပြစ်ရှိတယ်လို့ မခံစားရပါနဲ့! လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်နှင့် ဘီစကစ်တစ်ခုအကြောင်း ပွင့်လင်းရိုးသားစွာ စကားစမြည်ပြောခြင်းဖြင့် စတင်ရန်လိုပုံရသည်။
Q4: ငါ့ gf က Cam ပြန်ရောက်နေပြီ၊ ငါအိမ်မှာပိတ်နေတယ်။ သူ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အမီလိုက်ချင်တာကြောင့် (ကျနော်နားလည်ပါတယ်)၊ ဒါပေမယ့် ငါတို့ရဲ့ ပထမနှစ်ပတ်လည်က နီးလာလို့ အတူတူသုံးချင်တယ် (online) – ဒါပေမယ့် သူက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဆုံဖြစ်တာလို့ ပြောပါတယ်။ ညနေ သူကျွန်တော့်ကို ပထမဦးစားပေးမဟုတ်တော့ဘူးလို့ မက်ဆေ့ချ်ပို့နေတာလား မသေချာဘူး ဒါမှမဟုတ် နှစ်ပတ်လည်နေ့တွေက သူ့အတွက် အရေးမကြီးဘူးလား။ (မသိဘူး၊ ဒါ ပထမတစ်ခုပဲ) သူက ငါတို့ကြားက ကိစ္စတွေက ကောင်းတယ်လို့ ပြောပေမယ့် ငါတော့ မသေချာတော့ဘူး။
၌ လာမည့် ပေါ့တ်ကာစ် အပိုင်း Leila နှင့် Amira တို့သည် ဤမေးခွန်းကို အတော်လေး နက်နဲစွာ စူးစမ်းခဲ့ကြသော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့သည် အလွန်ရက်ရောသောကြောင့် ဤမေးခွန်းကို ကော်လံတွင် နေရာအနည်းငယ်ပေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
မထုတ်ဝေရသေးသော pod အပိုင်းရှိ Leila နှင့် Amira ၏ tl;dr သည် အခြေခံအားဖြင့် ဆိုလိုသည်မှာ- အဲဒါ မူတည်တယ်။ . မင်းရဲ့ gf က တစ်နှစ်ပြည့်တဲ့နှစ်ပတ်လည်ကို တကယ်ဂရုစိုက်ရမယ့်လူအမျိုးအစားလား? သော်ငြားလည်း, သင့်အတွက် အရေးကြီးကြောင်း သူမအား ဖော်ပြခဲ့ပါသလား။ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးသည် အပေးအယူမျှသော်လည်း ရိုးသားသော ဆက်သွယ်မှုလည်းဖြစ်သည်။ . သင့်အတွက် ဤဖြစ်ရပ်၏ အရေးပါမှုကို သင် သို့မဟုတ် သူမ၏ အပြုအမူက သင့်ကို ခံစားစေသည့် ပုံစံကို ဖော်ပြခြင်းမပြုပါက၊ အဲဒီအခါမှာ သူဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတာကို ကောက်ချက်ချလို့ မရပါဘူး။ . သင်က ကတိကဝတ်ပြုထားတဲ့ ဆက်ဆံရေးတစ်ခုရှိတဲ့အခါ သင့်အခြားတစ်ဝက်က သင့်ကို အသေးအမွှားမက်ဆေ့ခ်ျပို့ခြင်း ရှိ၊ မရှိ မေးခွန်းထုတ်မနေသင့်ပါဘူး။ အဲဒါကိုပြောပါ။
အညီအမျှ၊ မင်းရဲ့ ခံစားချက်ကို လိုက်နာဖို့ ငါယုံတတ်တယ်။ . တစ်ခုခုပြောနေတာလား။ သင့်လက်တွဲဖော်က သင့်ကို ဂရုမစိုက်တာ တစ်ခုခုဖြစ်နိုင်ပေမယ့် သင်က သင်ထင်ထားသလို မလိုက်ဖက်ပါဘူး။ လိုက်လျောညီထွေမဖြစ်နိုင်တဲ့လမ်းကို ခွဲနေသလား၊ ဒါမှမဟုတ် မင်းရဲ့လမ်းတွေပြန်မဆုံခင်မှာ ဒါက လမ်းရဲ့သေးငယ်တဲ့အဖုအထစ်တစ်ခုလားဆိုတာ သိဖို့လိုပါတယ်။
Q5- ဟိုင်း၊ ဒီအခြေအနေမှာ မင်းနဲ့ တခြားသူတွေကို အကြံပေးနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ နောက်တစ်နေ့တွင် ကျွန်ုပ်၏အိမ်ထောင်စုမှ တစ်စုံတစ်ဦးသည် COVID ကန့်သတ်ချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ ဥပဒေကို ချိုးဖောက်ခဲ့သည်။ ကောလိပ် COVID စည်းမျဉ်းများသာမက ကျွန်ုပ်တို့အိမ်ထောင်စုတွင် ပြင်ပဧည့်သည်ရှိခြင်းဖြင့်လည်း ဥပဒေပါရှိပါသည်။ သူတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်ထောင်စုစကားပြောခန်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့ကို ဦးစွာသတိပေးထားပြီး အိမ်တွင်းရှိအခြားသူများ အဆင်ပြေနေပုံရသော်လည်း ဥပဒေကိုချိုးဖောက်သူနှင့်နေထိုင်ရန် အဆင်မပြေပါ။ ကောလိပ်ကျောင်းကို မနှိုက်ဘဲ အနာဂတ်မှာ ဒီလိုမဖြစ်အောင် ကူညီပေးနိုင်မယ့် နည်းလမ်းရှိပါသလား။ ကျေးဇူးပါ။
ခ တခြားအိမ်ဖော်တွေနဲ့ ရိုးရိုးသားသားပြောပြီး ဒါက မင်းကို စိတ်မသက်မသာဖြစ်စေတယ်လို့ သူတို့ကိုပြောပါ။ မင်းရဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကိုကြားရတာ လူအများစုက ပျော်ကြလိမ့်မယ်။ သို့သော် ဤကဲ့သို့သော စကားဝိုင်းသည်ပင် နောင်တွင် သင့်အား ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် လူများကို အပြည့်အဝ တားဆီးနိုင်မည် မဟုတ်ကြောင်းကိုလည်း သိထားပါ။
ဤစကားဝိုင်းသည် အထူးသဖြင့် အဆင်မပြေ သို့မဟုတ် တုန်လှုပ်ဖွယ်ကောင်းသည်ဟု သင်တွေ့ရှိပါက၊ သင်သည် JCR သို့ အမြဲတမ်း အမည်ဝှက်ဖြင့် ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ . ကျွန်ုပ်၏ကောလိပ်ရှိ JCR ဥက္ကဌမှ အိမ်ထောင်စုများ အချင်းချင်း ပြောဆိုဆွေးနွေးရန်နှင့် COVID နှင့် ကပ်ရောဂါဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များတွင် လူများ အဆင်ပြေစေမည့်အကြောင်း ဆွေးနွေးရန် အကြံပြုထားသော အလွန်အလွတ်သဘော အီးမေးလ်တစ်စောင် ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။ ဤအီးမေးလ်သည် တစ်စုံတစ်ဦးကိုယ်တိုင် စတင်လုပ်ဆောင်ရမည့်အစား စကားစမြည်ပြောဆိုရန် အကြောင်းပြချက်ပေးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည် ကျွန်ုပ်၏အိမ်သူအိမ်သားများနှင့် တစ်ကယ့်ကို ချစ်စရာကောင်းသော စကားစမြည်ပြောခဲ့ပြီး ယခုအခါ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် ဤထူးဆန်းသောအချိန်များတွင် ကျွန်ုပ်တို့ အဆင်ပြေနိုင်သည်နှင့် ပတ်သက်၍ လှေပေါ်တွင် အတူတူရှိနေကြပါပြီ။
ဒါ့ပြင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို မေးပါ၊ သင့်အိမ်ဖော်၏လုပ်ရပ်များနှင့် သင့်ပြဿနာမှာ COVID ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်း သို့မဟုတ် ဥပဒေအားကြောက်ရွံ့ခြင်းလား။ ၎င်းသည် ယခင်ဖြစ်လျှင် ၎င်းသည် လုံးဝမှန်ကန်ပုံရပြီး ကူးစက်ခြင်းမှရှောင်ရှားရန် လိုအပ်သည့်အစီအမံများပြုလုပ်ရန် ၎င်းတို့အား တောင်းဆိုခြင်းသည် သင့်လျော်သည်။ ဧည့်သည်သည် သင့်အိမ်ဖော်၏အခန်းတွင်နေရန် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏စက်ပစ္စည်း/ပစ္စည်းများကိုသာ အသုံးပြုကြောင်း အုပ်စုချတ်တွင် အကြံပြုနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်းဖြစ်ရင်တော့ သင်ဟာ ကလေးဆန်တယ်လို့ ထင်ရနိုင်ပြီး တခြားသူတွေရဲ့ အပြုအမူကို ရဲရဲလုပ်ဖို့အတွက် သင့်အလုပ်မဟုတ်ပါဘူး။ သိမ်ငယ်ပုံမပေါ်အောင် ကြိုးစားပါ။ သင်နှင့်အတူနေထိုင်သောလူများကိုအပြစ်တင်ခြင်းမပြုမီသင်၏အိမ်ထောင်စုနှင့်စကားပြောပါ။
ကောင်းပြီ၊ ဒါတွေအားလုံးက ဒီတစ်ပတ် ငါတို့ဆီကပဲ…
ကျွန်ုပ်တို့တွင် စိတ်လှုပ်ရှားစရာတစ်ခုရှိသည်။ Freshers အထူးပေါ့တ်ကာစ် အပိုင်း အဝင်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုင်ဆောင်ထားသူဖြစ်ခြင်း၏ ဖိစီးမှုကို ဖြေလျှော့ရန် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဝင်လာသော Fresher တစ်ဦးဖြစ်ပါက သင့်တွင် မေးရန် နှင့် မျှဝေရန် စိတ်ပူစရာမေးခွန်းပေါင်း တစ်သန်းခန့်ရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိပါသည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ထံ အရောက်လာခဲ့ပါ တင်ပြမှုပုံစံ မျှဝေရန်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ အပတ်စဉ် ကော်လံများကို ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခြင်းအား ရပ်တန့်ရန် ဆုံးဖြတ်ထားသောကြောင့် သင်စိုးရိမ်နေသည့်အရာအားလုံးကို (နီးပါး) တင်ပြရန် လွတ်လပ်စွာ တင်ပြနိုင်ပါသည် ဒီမှာ . အဲဒါဘာလဲ? ဆက်ဆံရေးပြဿနာများ? တဖန်? ကောင်းပြီ၊ သွားသောတင်ပြချက်များအကွက်ထဲသို့။
အစောပိုင်း အပိုင်းတွေကို နားမထောင်ရသေးရင် ပေါ့တ်ကာစ် ၊ မင်းဘာလုပ်နေလဲ? အမှန်မှာ၊ ၎င်းသည် ဝေးလံသောအသုံးအနှုန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ မင်းအချိန်တွေဘာတွေလုပ်နေလဲ သင်အဲဒါကိုတွေ့နေချိန်မှာ၊ သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကို Instagram တွင် follow လုပ်ထားနိုင်သည်။ @မင်းရဲ့ကောလိပ်ကျောင်းသူလေးများ )
မင်းရဲ့ကောလိပ်က အန်တီ x
ဤသည်မှာ နောက်အပတ်အတွက် လင့်ခ်ဖြစ်ပါသည်၊ သင့်နှလုံးသား၏ အကြောင်းအရာကို မေးခွန်းများ တင်သွင်းပါ။
အင်္ဂါနေ့ မီးပျက်ခြင်းတွင် မည်သို့ပါဝင်မည်နည်း။
ဆွေးနွေးမှုတွင် စိတ်ဝင်စားစရာ တစ်ခုခု ထပ်ထည့်နိုင်မည်ဟု တွေးကာ ပေါ့တ်ကာစ်ကို နားထောင်ဖူးပါသလား။ ကောင်းပြီ၊ ဤတွင် ပေါ့တ်ကာစ်တွင် ဧည့်သည်ဖြစ်ရန် သင့်အခွင့်အရေးဖြစ်သည်။ သင်ဖြည့်သွင်းရန်သာလိုအပ်သည်။ ဒီပုံစံ ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုအတွက် ဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခုကို အဆိုပြုပြီး သင်သည် ဧည့်သည်ကောင်းတစ်ဦးဖြစ်မည်ဟု အဘယ်ကြောင့်ထင်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့အား ပြောပြပါ။ ဆက်သွားပါ၊ လျှောက်ထားပါ။ မင်းဘာတွေဆုံးရှုံးရမှာလဲ။
အထူးအသားပေးပုံ ခရက်ဒစ်- Leila Lawrence နှင့် Amira Nandhla